Maxaa Farmaajo ‘ku qasbay inuu soo dhaweeyo’ natiijada shir uusan aqoonsaneyn? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Maxaa Farmaajo ‘ku qasbay inuu soo dhaweeyo’ natiijada shir uusan aqoonsaneyn?
Muqdisho (Dalkaan.com) – Madaxweynihii hore Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa xalay jeediyey khudbad lama filaan ah, oo u muuqatay qaab olole dib u doorasho, isagoo sharaxay hanaankii ay u shaqeyneysay dowladiisa mudadii uu joogay xukunka.
Manchester United oo Samaysay Qalad weyn oo Dhinaca Suuqa Kala Iibsiga
Manchester United ayaa samaysay qalad weyn oo dhinaca suuqa ah markii ay doonatay laacibka reer Sweden ee Victor Lindelof sannadkii 2017kii, markaas oo...
Taliye ku-xigeenkii hore ee NISA oo sheegay in lagu deg-degay go’aankii...
Horudhac: Chelsea Vs Brentford ee Horyaalka Premier League-ga, Wararka Labada Koox...
Roma oo qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga Barcelona Sergino Dest.
DAGAALKA CUSUB EE ITOOBIYA OO 250-QOF AY KU DHIMATAY.
Everton oo ku dhawaaqday inay Shaqada ka Ceyrisay Tabaraheeda Rafael Benitez